केन्द्रीय कार्यसमितिको २०७५ माघ २३ गते बसेको बैठकको निर्णयहरु
१)	माघ २१ गते राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनमा भएको लाखौंको सहभागितालाई आभार प्रकट गर्दै छोटोे समयमा भव्य प्रदर्शन अयोजना गर्ने सबै जिल्लाको पार्टी पंक्तिलाई बैठकले बधाई ज्ञापन गरेको छ । प्रदर्शनको समाचार व्यापक रुपले सम्प्रेषण गर्ने सबै संचार माध्यमलाई पनि बैठकले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
२ं) पोखरा र धनुषाको घटना बारे
(क) सरकारका जनविरोधी कदमहरुका विरुद्ध गरिने कुनै पनि कार्यक्रम शान्तिपूर्ण ढंगले गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ । तर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा कतिपय दुःखद घटना पनि हामी कहाँ वर्षौ देखि हँुदै आएका छन् । तर तिनै निश्चित कुनै घटनालाई आधार मानेर नेपाल विद्यार्थी संघका परशुराम बस्नेत, डिफान भुजेल र विनय पौडेललाई हालै पोखरामा फौजदारी मुद्दा लगाउने विषयलाई हामीले गम्भीर रुपले लिएका छौं । अतः गिरफ्तार विद्यार्थीहरुलाई तत्काल रिहाई गर्न यो बैठक सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
(ख) माघ २१ गतेको प्रदर्शन सकिए पश्चात धनुषा, सवैला नगरपालिका वडा नं. १० खरियानी टोलका पार्टी सदस्य उमेश कापडीलाई कम्युनिष्ट पार्टीका केही कार्यकर्ताले गरेको सांघातिक हमलालाई बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । जनकपुरमा प्राथमिक उपचार पश्चात हाल उनको उपचार विराटनगरमा भइरहेको छ । तत्काल जाहेरी दर्ता गरी दोषी माथि कार्वाही गर्न बैठक सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक भोलि माघ २४ गते विहान ११ः०० बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पुनः बस्नेछ ।
आजको बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, केन्द्रीय सदस्यहरु— कृष्णप्रसाद सिटौला, महेश आचार्य, बालकृष्ण खाँण, डा. नारायण खड्का, डा. मिनेन्द्र रिजाल, आनन्दप्रसाद ढुंगाना र मोहनबहादुर बस्नेतले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।